Gothic Thriller 'Broil' dia napetraka tamin'ny famoahana amerikana tamin'ny oktobra
Home Vaovao Mahafaly Fialam-boly Gothic Thriller 'Broil' dia napetraka tamin'ny famoahana amerikana tamin'ny oktobra
by Timothy Rawles Enga anie 1, 2020
by Timothy Rawles Enga anie 1, 2020 899 hevitra
Well Go USA Entertainment dia mitondra ny Canadian throth gothic Broil ho any Amerika amin'ity volana oktobra ity.
Nofaritana ho toy ny tantara "toa ho avy amin'ny vanim-potoana mahazatra", Broil raha ny marina dia zavatra maizina kokoa.
“Taorinan'ny tranga mahery setra niaraka tamin'ny nemesis tany an-tsekoly tsy tambo isaina, Chance Sinclair (Avery Konrad) 17 taona dia nirahina hiaina miaraka amin'ny raibeny (Timothy V. Murphy) ao amin'ny taniny an-tendrombohitra lafo vidy. Rehefa mikasa ny hamantatra ny tena fiaviany amin'ny harena mihoampampana an'ny raibeny izy — ary toe-pahasalamana tsy fantatra miafina ao amin'ny fianakavianany - dia mety hahazo mihoatra lavitra noho izay naloany izy. Voasambotra vetivety teo anelanelan'ny ankolafin'ny ady roa an'ny fianakaviana, ny hany fanantenana an'i Chance ho tafavoaka velona dia mety ho avy amin'ny mpamono olona (Jonathan Lipnicki) miaraka amina lozisialy mahandro sakafo mahavariana. ”
Edward Drake, talen'ny asa soratr'i BROIL nilaza fa feno fankasitrahana an'ireo rehetra niasa tamin'ny sarimihetsika izy.
"BROIL dia noforonin'ny mpilalao Vancouver sy Victoria mahay ary ny ekipany, ”hoy izy. “Naka famantarana izahay Rosemary's Baby, Ilay mpamosavy, mivoaha, nifandimby, Barry Lyndon, ianao no manaraka, ary maro hafa ho entina BROIL amin'ny fiainana, tantara iray izay miorina 100% tanteraka amin'ny zava-misy marina. ”
Manazava ilay mpanoratra mpiara-miasa Piper Mars fa ilay horonantsary koa dia mihoatra ny tantara mahatsiravina. “BROIL mamantatra ny fomba ifampijalian'ny fianakaviana. Manantena aho fa ny sarimihetsika dia manasa ny mpijery hanontany ny tsiambaratelo sy ny fifandirana tsy misy ilana azy ireo eo amin'ny fiainany. ”
Famoahana fialamboly nomerika sy an-trano an'ny Broil dia kasaina ho amin'ny 13 Oktobra 2020
Ny sarimihetsika dia tarihin'i Edward Drake, nosoratan'i Edward Drake sy Piper Mars (Ilay Zatovovavy) ary novokarin'i Corey Large (Manaraka, Ilay Lehilahy Novambra).